Umthendeleko weBhayibhile weentonga (Rosh Hashanah) kumaKristu
Kutheni uRosh Hashana Ubizwa ngokuba ngumthendeleko weentonga eBhayibhileni
U-Rosh Hashana okanye uMnyaka omtsha wamaJuda ubizwa ngokuba ngumthendeleko weentonga eBhayibhileni kuba uqala iiNtsuku zoBukumkani eziPhakamileyo zamaYuda kunye neentsuku ezilishumi zokuguquka (okanye iintsuku ze-Awe) ngokubetha kwegodlo, i- shofar , ukubiza abantu bakaThixo ndawonye guquka e zabo zweni. Ngexesha likaRosh Hashana inkonzo zesikhungu, ixilongo isandila amanqaku angama-100.
URosh Hashana naye ngowokuqala komnyaka wabantu bakwaSirayeli.
Ngumhla oyingqungquthela wokufuna umphefumlo, ukuxolelwa, ukuguquka nokukhumbula isigwebo sikaThixo, kunye nosuku oluvuyoleyo lokubhiyozela, elindele phambili ukulunga nobubele bukaThixo kuMnyaka omtsha.
URhhh Hashanah ugujwa ngosuku lokuqala lwenyanga yesiHebhere yaseTishri (ngoSeptemba okanye ngo-Oktobha). Ikhalenda yeeBhayibhile yeBhayibhile inika imihla yangempela kaRosh Hashana.
Isikhokelo seZibhalo kumthendeleko weentonga
Ukugubha iMthendeleko yeCilongo kubhalwe kwiTestamente eNdala yeLevitikus 23: 23-25 ​​nakwiNumeri 29: 1-6.
Umthendeleko weentonga uqala noRosh Hashanah. Imibhiyozo iyaqhubeka iintsuku ezilishumi zokuguquka , zifikelele kwiYom Kippur okanye uMhla wokuhlawulelwa . Ngaloo suku wokugqibela weeNtsuku eziPhakamileyo, isiko lamaYuda sithatha ukuba uThixo uvule iNcwadi yoBomi kwaye afunde amagama, izenzo kunye neengcamango zabo bonke abantu abanamagama abhale kuwo.
Ukuba izenzo ezilungileyo zomntu zigqithise okanye zingaphezu kwezenzo zabo zesono, igama lakhe liya kuhlala libhaliswe kwincwadi yonyaka omnye.
Ngaloo ndlela, uRosh Hashana kunye neentsuku ezilishumi zokuguquka zibonelela abantu bakaThixo ithuba lokucamngca ngobomi babo, baphambuke kwisono, benze imisebenzi emihle. Ezi zenzo zenzelwe ukunika ithuba elihle lokuba amagama abo atywinwe kwiNcwadi yoBomi ngomnye umnyaka.
UYesu noRosh Hashanah
URosh Hashana uyaziwa ngokuba nguMhla woMgwebo. Kwisigwebo sokugqibela esichazwe kwiSityhilelo 20:15, sifunda ukuba "nabani na ogama lingabonakaliyo elibhalwe kwiNcwadi yoBomi baphoswa echibini lomlilo." Incwadi yeSityhilelo isitshela ukuba iNcwadi yoBomi iWundlu, uYesu Kristu (ISityhilelo 21:27). Umpostile uPawulos wagcinwa ukuba amagama abo bahamba naye bezithunywa zevangeli beza kuba "kwiNcwadi yobomi." (Filipi 4: 3)
UYesu wathi kuYohane 5: 26-29 ukuba uYise wamnike igunya lokugweba wonke umntu:
Ngokuba njengoko uYise enobomi kuye, ngokunjalo wamnika uNyana ukuba abe nobomi kuye, wamnika igunya lokugweba, ngokuba unguNdodana yoMntu. Uya kuza apho bonke abasemangcwabeni baya kuliva ilizwi lakhe baphume, abo benza okuhle ekuvukeni kobomi, kunye nabo benza okubi ekuvusweni kwesigwebo. " ( ESV )
Okwesibini uTimoti 4: 1 ithi uYesu uya kubagweba abaphilayo nabafileyo. Kwaye uYesu wathi kubalandeli bakhe kuYohane 5:24:
"Inene, inene, ndithi kuni, Lowo uva ilizwi lam, akholwa nguye undithumileyo, unobomi obungunaphakade. Akayi kumgwebo, kodwa udlulile ekufeni waya ebomini." (ESV)
Kwixesha elizayo, xa uKristu ebuya kwiXesha lakhe lesiBili, ixilongo liya kulila:
Yabona! Ndithi kuni imfihlakalo. Asiyi kulala sonke, kodwa sonke siya kutshintshwa, ngomzuzwana, ngokuphazima kweso, kwisigodlo sokugqibela. Kuba ixilongo liya kulila, kwaye abafileyo baya kuvuswa bengapheliyo, kwaye siya kutshintshwa. (1 Korinte 15: 51-52, ESV)
Kuba iNkosi ngokwayo iya kuhla ezulwini izwakalise umyalelo, ngezwi lengelosi enkulu, kunye nesandi sexilongo likaThixo. Kwaye abafileyo kuKristu baya kuqala kuqala. Emva koko thina esiphilayo, esisele, siya kubanjwa kunye nabo emafini ukudibana neNkosi emoyeni, kwaye ngoko siya kuhlala kunye neNkosi. (1 Tesalonika 4: 16-17, ESV)
KuLuka 10:20, uYesu wabhekisela kwiNcwadi yoBomi xa wathi kubafundi abangama-70 bavuya kuba "amagama akho abhaliwe ezulwini." Nanini na umkholi wamkela uKristu kunye nombingelelo wakhe nokucamagushela isono , uYesu uzaliseka kwintlanganiso yeentonga.
Iinkcukacha Ezininzi NgoRosh Hashanah
Unyaka omtsha wamaYuda ngumcimbi osisigxina ngakumbi kunokuba ugubha umNyaka oNyaka omtsha.
AmaYuda ayalelwe ukuba ave ukubetha kwegodlo kuRosh Hashana, ngaphandle kokuba iwa ngomhla weSabatha, kwaye i-shofar ayifuni.
AmaYuda angamaOthodoki athatha inxaxheba kwimibhiyozo eyaziwa ngokuba yiTashlich ngomhla wokuqala wokuqala kaRosh Hashanah. Ngethuba le "inkonzo yokugxotha" baya kuhamba emanzini ajikelezayo baze bathethe umthandazo ovela kuMika 7: 18-20, ngokuphosa izono zabo emanzini.
Isidlo seholide somtya we- challah isonka kunye nama-apula atyhidiwe ngo-honey ujongwa kwiRosh Hashanah, efanekisela ukubonelelwa kukaThixo kunye nethemba lobumnandi boNyaka Omtsha ozayo.
U-Shanah Tovah Tikatevu , elithetha ukuba " ungabhalwa [kwiNcwadi yoBomi] unyaka onobuhle ," ngumyalezo omtsha woMtsha woMtsha ofumaneka kumakhadi okubulisa, okanye uthethwa ngolu hlobo olufutshane njengoShanah Tovah , elithetha " unyaka."
UmPostile uPawulos wokuguqula iNdaba
I-SBA inikela nge-Intanethi 8 (a) Isicelo seNkqubo
Inkcazo yokuKhanya okubonakalayo
Biography ka Seiji Ozawa
Iifomula zokuguqula ukushisa
Izizathu ezine zokuxhasa i-Gay Umtshato kunye nokuchasa ukulungiswa komtshato wesigqeba